Mbara nke nyocha nke ndị ahịa anyanwụ - Kimroy Bailey Group
Anyanwụ ike ka bụụrụ ọtụtụ mmadụ echiche ọhụrụ. Onye ahia nwere ike inwe otutu ajuju ka i gha jikere iji obi ike zaa ajụjụ ha niile. Mmetụta mbụ dị mma n'oge oge mkparịta ụka nwere ike ịbụ ihe dị iche na ịnweta ọrụ karịa onye asọmpi. Yabụ ebe a bụ ndụmọdụ ole na ole gbasara isi ihe gị na onye ahịa gị kwesịrị ikwurita n’oge nnọkọ nke ndị ahịa anyanwụ dị. Enwere isiokwu anọ dị mfe ma kwụ ọtọ nke a ga-atụle n'oge a na-atụle ndị ahịa anyanwụ. Isiokwu ndị a bụ Gịnị kpatara ha ji aga anyanwụ, Gịnị bụ ebumnuche anyanwụ ha, Gini ha maara, Gini bu ego ndi ahia ma kedu ihe ha ga enweta? Ugbu a, ka anyị ruo ya nso.
Mbara Igwe nke Ahịa Mbara Igwe Ahịa # 1: Gịnị kpatara ha ji aga anyanwụ?
Azịza ya nwere ike iyi ihe doro anya na mbụ- ha chọrọ ịchekwa ego na ego ha. Agbanyeghị, enwere mgbe ụfọdụ enwere mkpali maka ịhọrọ ịgbakwunye anyanwụ na ụlọ ha. Gbalịa nweta akụkọ banyere- they na-eche na ụlọ ọrụ ike na-aghọgbu ha? Ndị agbata obi ha ma ọ bụ ndị enyi ha rụnyere sistemụ ọkụ anyanwụ na nso nso a? Ha na-anata ụtụ isi ma ọ bụ mgbazinye ego dị ala iji kwụọ ụgwọ maka sistemụ? Ha na-anwa ịbawanye uru ihe ha chere? Hà maara gburugburu ebe obibi ha? Story nweta akụkọ banyere ya na-ewulite ọdụ ma nyere gị aka ịhazi usoro maka mkpa ha.
Isiokwu Mbara Igwe Ndị Ahịa Solar # 2: kinddị arụmọrụ ha na-atụ anya na sistemụ ike anyanwụ ha?
Mpaghara a na nnọkọ dị ezigbo mkpa n'ihi na ọ na-abụkarị, ndị ahịa nwere atụmanya na-enweghị isi gbasara sistemụ ike anyanwụ ha. Yabụ ikwesiri ikpuchi ntọala niile dịka: grid tie vs off-g system system, ngwa ọrụ nke sistemụ ahụ ga-ike, ụbọchị igwe ojii, ike batrị na njikwa batrị, ịjubata sistemu na mfu nke ike wdg.
Ime omimi banye na mpaghara ndị a na ịkọwa ikike ike sistemụ nke anyanwụ ga - eme ka ndị zụrụ ya chegharịa ma emesia. Ana m akwado ka ị na-enye mpempe akwụkwọ e dere ede na azịza nye ajụjụ ndị a na-ajụkarị.
Mbara Anyanwụ Ahịa # 3: Ego ole ka ha ma?
N'inwe ego dị oke ọnụ dị ka nke a, ị nwere ike igosi na ha mere nyocha ụfọdụ. N'ihi ya, anwala idefe ihe dị ala maka onye ahịa ya- ọ gwụla ma onye ahịa chọrọ ihe dị ọnụ ala. Enwere ụdị ụdị dị elu nke batrị na batrị n'ọma ahịa. Mgbe ị na-ekwu okwu inverters, ụdị dị ka Outback, Schneider na Samlex na-atụle ezigbo mma. Ọ bụ ezie na batrị Rolls ka a na-ahụta dị ka ọkọlọtọ ọla edo na nchekwa batrị. Ndị ahịa na-eji ego a akpọrọ US 10,000 ma ọ bụ karịa nwere mmasị na ịdị mma.
Ndụmọdụ Onye Ahịa Na-ahụ Maka # 4: Gịnị bụ atụmatụ mmefu ego ha na gịnị nwere ike inweta ha?
Mkparịta ụka gbasara mmefu ego ga-ekpebi ma onye ahịa ọ ga-azụta ngwa ahịa ndị ahịa.
Mbara Anyanwụ nke Jamaica Logistics Hub
Atụmanya nke mgbasawanye nke Ọwa Mmiri Panama bụ ịmegharị ụgbọ mmiri nke mega-ụgbọ mmiri site na obi ... GỤKWUO
Mkpuchi Mmechi: KB Blogger nke Afọ
Mkpo akwụkwọ mkpuchi nke ngalaba ọrụ na agụmakwụkwọ nke onye na-ahụ maka ụbọchị Sọnde gụrụ: 2012 Blogger of the Year… GỤKWUO
Arịrịọ maka Nkwado: KB Foundation Tag Drive
Nkpirisi Kimroy Bailey: Nkwekorita nke Ubochi na Ubochi nkwanye ugwu iji bulite ego maka uzo izizi nke Caribbean… GỤKWUO
Renewable Energy & robotics nwere ike itolite aku na uba ndi Jamaica nke ukwuu. Afọ iri anọ nke uto 0-1% etolitewo a… GỤKWUO
Studentsmụ akwụkwọ 70, ụbọchị 5, KB Ragawable Robotics Summer Camp
Onye Jourdan Dunkley nyere onyinye, onye ji mpako sonyere na Kimroy Bailey Summer Robotics Camp. Jourdan (onye edemede) 2nd site n'aka nri na ... GỤKWUO
Akụkọ Ngụsị Akwụkwọ M
Ezinaụlọ m: Keith Bailey, Dorcas Bailey, Kimroy Bailey na Lakeith Bailey Na Nọvemba 3, 2012 Enwetara m ndị Bachelor na… GỤKWUO